सुधारगृह बनेनन् कारागार : कैदीका नाममा वर्षेनी १३ अर्ब स्वाहा ! « Khabarhub
सुधारगृह बनेनन् कारागार : कैदीका नाममा वर्षेनी १३ अर्ब स्वाहा !
१९ श्रावण २०७६, आइतबार
काठमाडौं–गत शुक्रबार नख्खु कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा एक जनाले ज्यान गुमाए । दिउँसोको समयमा आपसी कुरा नमिलेपछि भएको झडपमा कैदी पूर्णबहादुर राजीको ज्यान गयो । कारागारकै सिमेन्टको ब्लक उठाएर पूर्णबहादुरमाथि आक्रमण गर्ने कोमलकुमार महतो थिए । उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पछिल्लो समय घटेको यो जस्तै घटना कारागारमा घटिरहन्छन् । यसको उचित व्यवस्थपनका लागि सरोकारवाला निकायले गम्भीर भएर काम गरेको पाइँदैन ।
कारागार अर्थात विभिन्न अपराधमा कसुरदार ठहरिएकाहरुलाई सुधारका लागि राख्ने ठाउँ हो । जुन अपराधी थुन्ने मात्र होइन, सुधार्ने स्थान पनि भएकाले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि धेरैको छ । कारागार सुरक्षाका हिसाबले पनि मजबुत हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । तर, हाम्रो देशका कारागारमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले कारागार सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह् खडा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, कारागा भित्र भएको झडपमा परी २०६७ यता ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २९ जना घाइते बनेका छन् ।
कहिले कसको मृत्यु ?
२०६७ भदौ १७ गते, कपिलबस्तु कारागारमा झडप हुँदा थुनुवा बिनोद कुमार पाठकको मृत्यु ।
२०६८ पुस १ गते, चितवन कारागारमा झडप हुँदा थुनुवा शिबप्रसाद पौडेलको मृत्यु ।
२०६९ पुष १० गते, काठमाडौंको नख्खु कारागारमा श्री नेपालको मृत्यु ।
२०७३ माघ १७ गते, पर्सा जिल्ला कारागारमा राजुबाबु बानियाको मृत्यु ।
२०७६ साउन १७ गते, नख्खु कारागार, पूर्णबहादुर राजीको मृत्यु
स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ८ बर्षमा २९ जना कैदिबन्दी कारागारभित्र घाइते भएका छन् । त्यसमध्य सबैभन्दा बढी ८ जना पर्वत कारागारका कैदिबन्दी छन् । त्यस्तै चितवन कारागारमा ४ जना, कास्कि कारागारमा ६ जना, पाल्पा र दाङ कारागारमा ५/५ जना घाइते भएका छन् ।
यस्ता छन् कारागार भित्र भएका केही ठूला घटना
२०७६ साउन १७ गते शुक्रबार दिउँसो नख्खु कारागारमा जुम्रा हेरिरहेका दुई कैदीबीच झडप हुँदा एकले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए ।
२०७३ मंसिर १२ गते, महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा कैदीबन्दी बीच झडप हुँदा २२ जना घाइते ।
२०६९ पुस २५ गते बुधबार, मध्य राति सिन्धुलि कारागार भित्रै कैदी बन्दीहरुविच कुटाकुट मच्चियो । कुटपिटबाट कैदी निरज देवकोटाको मृत्यु भयो । घटनामा परि अन्य सातजना कैदीहरु घाइते भए ।
२०६९ कार्तिक, प्रहरीको आँखै अगाढि करिव ८० फिट लामो सुरुङ खनेर कुख्यात अपराधीको जत्था पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारबाट फरार ।
२०६८ साल मंसिर २० गते, चितवन कारागार भित्र झडप भयो, झडपमा परि घाईते भएका ४ जना मध्य एकजनाको मृत्यु भयो ।
२०६८ साल मंसिर १४ गते, मकवानपुरको भिमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागारमा झडप हुँदा १२ जना घाईते भए ।
२०६७ साल फागुन २६ गते देशकै सर्वाधिक सुरक्षित मानिने केन्द्रीय कारागारमै गोली चल्यो, गोली लागि सञ्चार उद्यमी युनुस अन्सारी घाईते भए ।
२०६६ सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागार भित्र कैदीबन्दीको एउटा समूहको कुटपिटबाट कैदी अर्जुन तामाङको मृत्यु भयो ।
कुन कारागारमा कति कैदीको मृत्यु भयो सूची हेर्नुहोस्
यसबाहेक पनि कैदीहरुबीचको झगडा, सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भाग्ने लगायतका थुप्रै घटना छन् । कारागारमा झडपका घटना भएको कुरा कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक बासुदेव घिमिरे पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार अहिले देशभरका कारागारलाई क्ष्ँमता भन्दा कैदी बढी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले समस्या बढाएको हो ।
यता प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल पनि कारगारमा सुरक्षा मजवुद् पारिएपनि बेला बखत घटना हुनेगरेको कुरा स्वीकार्छन् । उनि भन्छन् – कारागकारको भौतीक संरचनाको अवस्था निकै दयनिय छ । कोचाकोच गरेर कैदीबन्दी राख्नु पर्ने अवस्था छ । यसले सुरक्षामा समस्या निम्त्याएको छ । यद्यपी यदाकता प्रहरीबाट लापरबाही भएको घटनामा पनि देखिएका छन् । उनि थप्छन्–हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाहिको दायरामा ल्याएका छौं । नेपाल प्रहरी यस प्रकारको बिषयमा सचेत रहेको छ ।
क्षमता १५ हजार, कैदीबन्दी २२ हजार
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभरका कारागारमा कुल १५ हजार ४ सय ६६ जना कैदिबन्दी राख्ने क्षमता छ । जसमा २१ हजार ५ सय ७७ जना कैदिबन्दि छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार, संखुवासभा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, पर्सा, पाल्पा, दैलेख, जुम्ला, अछाम, वैतडि र डडेल्धुरा लगायतका १२ जिल्ला बाहेकका ६५ जिल्लामा क्षमताभन्दा बढि मात्रामा कैदिबन्दी छन् । यसले पनि थप समस्या निम्त्याईरहेको छ ।
देशभरका कारागारमा कति क्षमता ?
कैदीबन्दीका नाममा वार्षिक १३ अर्व स्वाहा !
अहिले सरकारले कैदी वन्दीलाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ पैसा दिंदै आएको छ । यस बाहेक दशैं खर्च, सुत्केरी खर्च, लत्ताकपडा, औषधी उपचार लगायतमा पनि खर्च हुन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता बासुदेव घिमिरेका अनुसार, एकजना कैदीबन्दी बापद् सरदर मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
यसलाई हेर्दा २१ हजार ५ सय ७७ जना कैदीबन्दीका लागि मासिक १ अर्ब ८ करोड हाराहारी खर्च हुन्छ । यही रकमलाई एकबर्षको हिसाव गर्दा १३ अर्ब हाराहारी कैदीबन्दीका नाममा मात्र खर्च भइरहेको छ ।
भनिरहनु पर्दैन अहिले देशभरका कारागारालाई क्षमता भन्दा कैदी बढी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रहरीका अनुसार पनि कारागारको दुरावस्थाका कारण पनि सुरक्षामा कठिनाई भएको हो । तर, यसो भन्दैमा सुरक्षा निकाय र कारागार प्रशासनको लापर्वाही भएको छैन चाहीं भन्न मिल्दैन । हुनपनि घटना श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा घटेको छ, सुरक्षामा कमजोरी भएको पनि सवैलाई थाहा छ, घटनाबारे प्रतिवेदन पनि निस्कन्छ, अव सुरक्षामा नचुक्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिन्छ तरपनि समस्या भने बढिरहेको छ । यो विषयमा अनुसन्धान गरि चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको निकास खोज्नुपर्छ ।